Ukwenza imge nge - YouTube: Indlela YeTubers Yenza Ngayo Imali
Kubantu abaningi, yilokho umsebenzi we-YouTuber obonakala uhlanganisa. Vele uhlale phansi fabi kwekhamera futhi wenze amavidiyo ngokudla ukudla, ukwenza amakhono wokuzilungiselela, noma udlala nje imidlalo yevidiyo futhi uzokwenza imali kuyo yonke imibono oyitholayo.
Ienāciet, ieejiet i-YouTuber akvārija njengokubukeka kwayo, futhi uma ucabanga ukugxuma ezweni le-YouTubing, kunemibuzo emibili emikhulu okudingeka uyiqaphele:
I-YouTuber jenza malini?
2.3 I-2, Ukubhanka Ngaphandle kwe-YouTube
2.6 I-3- Amandla E-kopfinansējums
3.1 Ingabe Lokhu Kuve?
3.2 Lietotāja vietne i-YouTube neatbalsta vietni
Ngaphambi kokuba sifinyelele ekuthambekeni kwe-nitty kokwenza imali njenge-YouTuber, ake sibheke ezinye ze-YouTubers ezerkulu kunazo zonke futhi uhlole ukuthi zenzani okuningi.
Ucwaningo olwenziwa dai Ama-Media Media Rockstars iveza ngokucacile ukuthi iziteshi ezinkulu ku-YouTube ziyithola kanjani futhi eziningi zazo zingathola inzuzo enkulu kumavidiyo nakubhalisile. Enye ye-YouTuber injalo PewDiePie (UFelik Kjellberg), oyala abangaphezu kwezigidi ze-500 esiteshini sakhe ngokubuka okungu-1,5 wezigidi ngevidiyo ngayinye.
Ukuba yisiteshi esisodwa esibhalisiwe ku-YouTube, i-PewDiePie ithola kalula imali activphezu kwezigidi ezingu- $ 12 minyaka yonke kusukela kuyo yonke imizamo yakhe nangaphezulu. Esinye isiteshi, i-Rooster Teeth Company, yokudlala nokuzijabulisa, ihola i- $ 13 miljoni minyaka yonke, kuyilapho iziteshi ezincane njenge-Nigahiga ne-Epic Meal Time zithola i- $ 2,9 yezigidi kanye ne- $ 3,1 million ngokulandelana.
Ukuguqula ukwenza imali ku-akhawunti yakho kukuvumela ukuba uthole imali kusuka kokuqukethwe kwakho kwangempela ngezikhangiso ezibekwa kumavidiyo wakho uma zibukwa. Ienākošo i-Google Adsense ikreiz, kad ukušetha ulwazi lokukhokha futhi uvumele, i-Google ukuthi ibeke izikhangiso kumavidiyo akho, yilapho uzothola khona imali enkulu ye-YouTube yangempela.
Okokugcina, kuzodingeka ufake isicelo se-a Uhlelo lokubambisana lwe-YouTube Uhlelo oluzokunika izinzuzo ezimbalwa ku-akhawunti yakho, njengamathuluzi wokuhlaziya, amathuluzi okuhlela Athuthukiyi, nokukwazizii. Ukuze ube nguzakwethu we-YouTube, kuzodingeka ube nokubuka komphakathi kwe-10,000 esiteshini sakho (isib. Ukubukwa kwe-1000 kumamavidiyo we-10) futhi kubuyekezwe yi-YouTube ukuba abe nguzakwethu we-YouTube oqinisekwe.
Uma usutholile konke okwenziwe, ekugcineni singagxuma ezinamba zangempela zendlela ongayithola for the YouTube – YouTube.
Uma uqala ukwenza imali ngamavidiyo akho, ungakhetha ukuthi ufuna ukuthi izikhangiso zivele kumavidiyo akho nokuthi imali engagekanani ozothola iyoxhomeka ekutheni izethameli zakho zithinta kanjani. Nakuba kuyindlela ecacile kakhulu yokuthola imali ku-YouTube, futhi kuyinkimbinkimbi kakhulu ngenxa yokuthi i-YouTube iyayibala.
I-YouTube ibonisa ukubonakala (uma umbukeli echofoza noma ebukela izikhangiso zakho) nakuwo wonke umbono we-1000, uzothola cishe i- $ 7.50. Inkinga indlela ukucabanga ngayo kubalwa ngayo, njengoba kuncike kakhulu ekusebenziseni izethameli zakho. Uma umbukeli enquma ukweqa ngezikhangiso noma ukusebenzisa i-ad-block, ngeke ukwazi ukukhokhelwa umbono. Ngenxa yalokho, ukubukwa okuphezulu akusho ukuthi kuhumushe ividiyo ezuza kahle. Ividiyo enezibuko ze-10 000 ingahle ibe nokubonakala kwe-3000 ayizinkulungwane, okusho ukuthi ihumushe kuphela ku- $ 22.50 kuphela.
Neapšaubāmi kokulhi kulula ukusetha, ukuzuza imali ngqo kusuka ku-YouTube akuvami ngokwabo, ukuthi kungani u-YouTubers amaningi enithola ezinye izindlela zokuthola.
I-2, Ukubhanka Ngaphandle kwe-YouTube
Njengoba kumile manje, ukuzuza kuphela ku-YouTube kuthola kanzima kakhulu futhi ngenxa yaleso sizathu, akumulators into activivaile ukubona i-YouTuber iya ngaphesheya kwe-YouTube ukwenza imali yabo. Njengamanje, lezi zindlela ezintathu ezinkulu ziyi: ukuxhaswa nokufakwa kwemikhiqizo, ukuthengisa izinto zokuthengisa, nokuthengwa kwabantu.
Enye yezinhlinzeko eziningi zokuxhaswa kwe-YouTube ezitholakalayo I-FameBit, kas katrā ziņā ir yabadali ukuze bathole amathuba okuxhasa futhi bathole imali ekudaleni nasekusabalaleni okuqukethwe.
I-3- Amandla E-kopfinansējums
Umthamo wamanje phakathi kwabadali bokuqukethwe yikusetshenziswa kwezidumbu zabantu abaningi futhi amapulatifomu amabili amakhulu kunazo zonke manje I-Kickstarter futhi I-Patreon. Umehluko phakathi kokubili yilokho okwakunjalo kusezimali ezixhaswe ngephrojekthi kanti enye enye uhlobo oluphindaphindiwe. Ukuqoqwa kwezimboni kuyindlela enhle kakhulu yokubeka amathaya ukuvuza abalandeli bakho ngokushintsha imali enkulu. Izibonelo ezimbalwa zemiklomelo jāithathu kukhona okuqukethwe okukhethekile kumalungu akhokhelwayo, izingxoxo zomuntu ngamunye, kanye nokuthengiswa okukhethekile.
Ngezinguquko i-YouTube šajā vietnē ngenqubomgomo yayo yokwenza imali, abaningi abadali bokuqukethwe kanye ne-YouTubers bavulele izethameli zayo ukuxhaswa umsebenzi wabo. Ukuqoqwa kwezimboni kungaba umthombo ongajwayelekile wemali engenayo uma usebenzisa kahle, kodwa udinga ukwazi ukuthi yiyiphi ipulatifomu evumelana nezilaleli zakho.
Uma uhlobo lokuqukethwe ofun ukukwenza kuyi-off-offs (isib. Isici sefilimu noma i-albhamu yomculo), i-Kickstarter ngokuvamile iyindawo engcono kakhulu yokuqala.
Ku-Kickstarter, izmantojiet ikhasi leprojekthi ngenani lemali oyidingayo ukuqedela iphrojekthi yakho. Abantu bāze bethemba kuso futhi uma ulawula ukufinyelela imigomo yakho esikhathini esinqunyiwe, uzothola izimali. Imiklamo ye-kickstarter iningi kakhulu emvelweni ngamanye amaphrojekthi afinyelela kwizigidi zamaRandi ngemali.
Eziningana eziphawulekayo njenge- Es-Kung Fury ikwazi ukuqoqa imali engu- 600.000 USD yezimali kusuka ezifungo zayo.
Ngesikhathi i-Kickstarter ithatha isamba esikhulu se-projicēšanas finansējumi, uPrereon isetshenziselwa kakhulu ukulinganisa okuncane kodwa izinto eziqhubekayo zokuqukethwe.
Kungenzeka ukuthi uthole ukuthi u-YouTubers ubiza i-Patreon ekhaya ngoba inganikeza umthombo ongenamathele weholo uma kuqhathaniswa ne-Kickstarter. Ngokufanayo ne-Kickstarter, usungule ikhasi elinemigomo yokuxhaswa ku-Patreon, umehluko wukuthi umgomo wenkxaso yenyanga njalo kunomuntu owodwa. I-YouTubers jaunākās grāmatas Jim Sterling futhi I-Red Letter Media ziyizibonelo ezinhle zamakhasi we-Patreon aphumelelayo ngemali engagephezulu do $ 12,000 ne- $ 19,000 ngokulandelanayo, nyangazonke.
UJim Streling uthatha ekhaya $ 12.000 + vairāk kā pēdējais skaņdarbs yakhe Isiteshi se-YouTube.
Ingabe Lokhu Kuve?
Kulula ukucabanga ukuthi njenge-YouTubers, konke okumele ukwenze kungukuzijabulisa ngekhamera. Kodwa iqiniso le ndaba, ukuthi u-YouTuber kusho ukusebenza ngaphandle kwekhamera ukuhlela futhi cwaninga okuqukethwe kwakho, ukuthola izindlela zokwenza imali ngokuphumelelayo, futhi uqiniseke ukuthi unayo ekle.
Lietotāja vietne i-YouTube neatbalsta vietni
Kuyo yonke sākās jūs-PewDiePie impumelelo, kunamanye amanye ama-YouTubers abesazama ukukwenza ku-YouTube futhi asinda. Yingakho abadali bokuqukethwe banqume ukungathembeki kuphela ku-YouTube njenge-platform yabo yokusatshalaliswa.
Ku-201, uJimmy Tatro waqala "I-TheJimmyTatroChannel," eyashintshwa kamuva yaba "LifeAccordingToJimmy. "I-Tatro ibonakala ibhekene nesichungechunge se-Netflix" i-amerikāņu vandālis. "; kanye nama filma "Jump Street" Nē- "Pieaudzis 2".